Waa maxay faa'idooyinka dabacasaha? - Hagaajinta Caafimaadkaaga - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah Waa maxay faa'idooyinka dabacasaha? - Hagaajinta caafimaadkaaga
Waa maxay faa'idooyinka dabacasaha? - Hagaajinta caafimaadkaaga
Karootada waa khudaar caafimaad qaba iyo kuwo jilicsan, oo cayriin sida karsan. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ay ku jiraan karootada cuntooyinkeena sababtoo ah nafaqooyinkooda. Waxaa laga yaabaa inaad ka yaabtay waxtarka dabacasaha. Waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo dambe ee maqaalkani.
Karootada waxaa lagu dhejiyaa beta-carotene, kaas oo siinaya midabkooda midab-badeedka. Waxay sidoo kale bixiyaan vitamins A, C, B1, B2, B3, B6, B9, C, E, choline iyo K, iyo macdanta sida potassium, manganese, iron, calcium iyo fosfooraska,.
Khudaarta cagaaran waxaa badanaa ka kooban carbohydrates. Waxay sidoo kale ka dhigan yihiin ilo wanaagsan Dunta kuwaas oo aan ku jirin dufan aan buuxin ama baruurta. Karootada ayaa leh kalooriyooyin yar, kaliya 40 for gram 100, sidaa daraadeed waa doorasho wanaagsan oo ah cunto caafimaad leh oo qayb ka ah cunto dheellitiran.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido: 8 faa'iidooyinka aan la garaneyn ee cabitaanka karooto
Karootada waa cuntooyin hodan ku ah fitamiinada iyo antioxidants faa'iido leh.
Karootada waxay keenaan antioxidants jirka
Khudaarta ayaa leh heerar sare oo ah antioxidants, sida fitamiin A, kaas oo gacan ka geysanaya kor u qaadista caafimaadka guud iyo wuxuu yaraynayaa halista wadnaha wadnaha iyo kansarka, sida kansarka mindhicirka, afka iyo afka sanbabada. Waxay sidoo kale ku jiraan phytonutrient oo loo yaqaan falcarinol, oo ah antioxidant xoog leh.
Haddii ay saameyn ku yeeshaan aragtida guud guud ahaanwaxay si gaar ah uga faa'iideysanayaan kor u qaadida awooda aragti habeen. Beta-carotene iyo vitamin A waxay ka caawisaa unugyada retina, oo masuul ka ah saameyntooda faa'iido leh.
Inkasta oo dabacasku leeyahay faa'iidooyin badan oo wanaagsan, isticmaalka xad dhaafka ah ee karootiga ayaa keeni kara xaalad la yiraahdo midabka carotenoid, oo ka muuqda calaacasha gacmaha, cagaha cagaha ama qaybaha kale ee maqaarka. Waxay ka dhalataa muuqaalka muuqaalka orange ama jaalaha, sababtoo ah heerarka sare ee carotene ee dhiiga.
Sidaas daraadeed, waa lagama maarmaan, haddii loo baahdo, si loo yareeyo isticmaalka fitamiinadaas si ay dhibaatadani u baaba'do.
Marka qadarka xad-dhaafka ah ee fitamiin A loo isticmaalo muddo dheer, calaamadaha sida lallabbo, dawakhaad, matag iyo madax xanuun ayaa dhici kara, iyo sidoo kale hypervitaminosis A. Tani waa xaalad halis ah oo dhacda sababtoo ah raasumaalka heerarka sunta ee beerka oo u baahan daaweyn caafimaad.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido: 7 Faa'idooyinka ay ka mid yihiin Karootada Cunnadeeda Xilliga Uurka
Waxay xakameynayaan wareegga dhiigga waxayna caawiyaan hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga
Warshadani waxay saameyn wanaagsan ku leedahay xeerka cadaadiska dhiigga.
Mar labaad, karootada ayaa faa'iido u leh habeynta wareegga dhiigga ee jidhka, oo hubinaya in wadnaha iyo sanbabadu waxay leeyihiin nafaqooyin si ay u shaqeeyaan si waxtar leh.
Waxay sidoo kale yareeyaan khatarta cudurrada wadnaha iyo dhiig-baxa waxayna caawiyaan hoos u dhigidda cadaadiska dhiigga, iyada oo ay ugu wacan tahay cuntadooda succinic, oo leh sifooyin antihypertensive ah waxayna caawineysaa in la badiyo maraakiibta dhiigga.
Sidee loo sameeyaa saabuunta qumbaha guriga si aad u daryeesho maqaarkaaga
Soo celi buuggan qurxinta qotada dheeriga ah si aad ula dagaallanto dhibaatooyinka maqaarkaaga, u fiirso oo u ixtiraamo PH Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/quels-sont-les-bienfaits-des-carottes/
Sida loo nadiifiyo maqaarkaaga maqaarkaaga 3 Remedies - Hagaajinta Caafimaadkaaga